सार्वजनिक अख्तियार - यो सम्बन्ध Mezhuyev मान्छे characterizes एक विशेष घटना हो। यो अवधारणा जस्तै oratorical प्रतिभा, वा उल्लेखनीय बुद्घि को "शक्ति" को रूपमा, प्रभाव यस्तो प्रकारका देखि एकदम अलग छ। Coercive, कज्याउने तरिका यो विशेष गरी प्राकृतिक क्षमता वा मूल्य को घटना को गुणहरू प्रयोग संग, कुनै पनि वस्तु को इच्छित व्यवहार निर्धारण गर्न असम्भव छ। प्रभाव यी प्रकारका मात्र एक स्वभाविक, uninterpreted वर्ण भएको, व्यवहार को motivations छन्। तिनीहरूले अधिकारीहरूले आफ्नो जागरूकता (वा सार्वजनिक अख्तियार) को समय समावेश गर्न सक्दैन र बलियो-इरादों जबरजस्ती वस्तु रूपमा कथित छैन।
प्रादेशिक सार्वजनिक अख्तियारको विमान मा अवधारणाहरु विचार मा पराधीन र हैकम र कथित वस्तु र विषय को सम्बन्ध छ। बस र जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक अधिकतम वेबर द्वारा विज्ञान को स्थिति संग एकै समयमा "शक्ति" को अवधारणा विचार formulated गरिएको छ कसरी पनि प्रतिरोध विरुद्ध, आफ्नै इच्छा आयातित मौका प्रदान गर्न। उदाहरणका लागि, उहाँले श्रोताहरूलाई प्रेरित सचेत volitional जबरजस्ती देखाउन छैन। हाम्रो जीवनमा एकै समयमा एकदम साधारण यस्तो जबरजस्ती छ। उदाहरणका लागि, आफ्नो बुबाको परिवार मा आफ्नो इच्छा imposing। वा अर्को उदाहरण: निर्देशक, आदि को कम्पनीको बोर्ड भुक्तानी गर्न निर्णय तर, यो शक्ति छैन सार्वजनिक र सामाजिक चासो आधारमा प्रकट, र आधारित परिवार वा घरेलू एक फरक खालको सम्बन्ध छ।
सार्वजनिक शक्ति सामूहिक को हित मा exercised हुनुपर्छ, यो epitome थियो जो। तर वास्तवमा, यो एक फरक देखिन्छ: अक्सर यो प्रवल हुन सक्छ, आर्थिक राजनीतिक र ideological levers प्रयोग असर जो, समाज मा सेना द्वारा प्रयोग गरिएको छ। कहिलेकाहीं यो शक्ति को प्रकार एक विशेष नेता को व्यक्तिगत शक्तिमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, र कुनै पनि टोली यस्तो सार्वजनिक कार्यालय को मालिक सामूहिक चासो गर्न विरोध छन् स्थितिहरू पकड हुन सक्छ। र पनि अवस्थामा जहाँ एक सार्वजनिक अख्तियार टोलीमा फाइदाको लागि आफ्नो शक्ति अभ्यास मा, केही कर्मचारीहरु, कर्मचारी वा नेताहरूको फारममा उनको शरीर आफ्नै चासो छ। इतिहास देखाउँछ यस्तो संघर्ष भनेर मद्दत पङ्क्तिबद्ध संग कहिलेकाहीं क्रान्तिको को बिन्दु गर्न, शक्ति र विभिन्न तरिकामा टोलीमा इच्छा समाधान छन्।
को अधिकारीहरु र साधारण नागरिकहरु बीचको सम्बन्ध को एक उच्च स्तर बढ, दुई पक्ष बीचको मध्यस्थ राज्य को अधिकार छ। सामान्य मा राज्य प्रशासन र विशेष मा कम्पनी को लागि प्रवर्तन यस प्रकार। राज्य प्रतिनिधिहरु को संरचना अंगहरु को उपलब्धता छ राज्य शक्ति, को केन्द्रीय र क्षेत्रीय साथै स्थानीय सरकार सहित। यी शरीर को प्रतिनिधिहरु पूरा र राष्ट्रिय क्षेत्रमा सार्वजनिक अख्तियार प्रतिनिधित्व छ।
संरचना र कुनै पनि देशमा सार्वजनिक अधिकारीहरु प्रणाली सत्तारूढ राजनीतिक शक्ति द्वारा निर्धारित र सान्दर्भिक नियमहरु मा तय गर्नुपर्छ। तसर्थ, संविधान यस्तो शरीर र संस्थाहरू राज्य, संघीय र स्थानीय संस्थाहरूको नियन्त्रण व्यायाम (उदाहरणका लागि, मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय, वित्तीय नियन्त्रण विभिन्न सेवाहरू, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगहरु, आदि) को आवंटन। ध्यान बिना यहाँ रहन र नागरिकहरु मा एक निश्चित प्रभाव प्रदान छैन।
स्थानीय र क्षेत्रीय स्तर मा, जस्तै सार्वजनिक अधिकारीहरु को संख्या पाठ्यक्रम, संविधान द्वारा नियमन गर्न क्षेत्रीय विशेषताहरु आधारमा भिन्न हुन सक्छन्, र decrees, उच्च अधिकारीहरूले आदेश अपनाए र।
लियोनिद Mihaylovich: Chernovetsky फोटो र जीवनी
राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक संस्थाहरु को प्रकार
कम्प्युटरमा के छ? कसरी कम्प्युटर प्रयोग गर्न सिक्न। एक कम्प्यूटर कार्यक्रम, खेल
"काँडाको मुकुट" के हो?
Ubuntu को छडी प्रयोग गरेर कसरी स्थापना गर्न
किन गाजर बारेमा सपना? हामी सिक्न!
बढए को कोठा। विन्डो फ्रेम काठ छन्। आफ्नै हातले विन्डो फ्रेम
तपाईं क्यू खोल्न र किन यी फाइलहरू प्रयोग गरिन्छ